OYEGUN MERE TINUBU: EBE IMA NKEA, IMA NKE ỌZỌ – Kpodo – hoo!haa!!
OYEGUN MERE TINUBU: EBE IMA NKEA, IMA NKE ỌZỌ – Kpodo
Ofu n’ime ndi ndu otu ọchịchị All Progressive Congress, APC, na steeti Bayelsa bụ Perekeme Kpodo nọrọ na Tọsdee gara aga gwa onye ji okwa onye isi-oche n’otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị APC bụ John Oyegun ka owere ọsọ were ije gbaa arụkwaghịm.
Kpodo bụ onye ruburu ọrụ onye isi oche otu APCA n’ụdị jide ka m bịa na steeti Bayelsa sịrị na Oyegun kwesịrị iritu maka na ojighị orụ ya kpọrọ ihe tinyekwara na ọ na-akụ mkpụrụ nkewa n’etiti ndi otu APC.
Kpodo kwuru na Oyegun enweghị ike ijisi uru nke ndi APC nwetagoro ike, kama na ọ na-agbara onwe ya onwe ya nke mere na ndi otu APC na abanye n’ọtụtụ esemokwu bụ ndi nke enwere ike igbochị.
Ọ sịrị na Tinubu so na ndi kpara nkata APC jiri merie. Ọ gara n’ihu kwue na Tinube nakwa ndi enyi ya ụfọdụ tinyere akọ n’uche ha nakwa ego ha na ihụ na APC bụ ihe ọbụ taa.
O kwuru na onye isi ala bụ Buhari na ndi otu nke ya rụkwara ọrụ gbara dimkpa iji wube otu APC.
N’okwu ya, ọbụ mbọ ndia gbara tinyekwara na ike otu ọchịchị PDP gwụrụ ndi mmadụ mere APC jiri nweta mmeri ya. Ọ sịrị na ndi PDP banyere na-ịkpa agwa imakwa ndi anyị bụ nakwa imefu ego aghara aghara, ma kwukwa na onye isi ala mgbe ahụ kwadoro ha.
N’uche ya, nkea mere na olile anya onye ọbụla mgbe ahụ dabere na APC, nkea mekwara APC jiri nweta mmeri.
Kpodo kwara ariri sị na ebe ndi APC siri gahie ụzọ bụ ijiri Oyegun mere onye isi oche. Ọ sịrị na Oyegun enweghị ike ịchịkwata otu APC ka esiri tua anya n’aka ya.
Oboro ya ebubo adịghị ike ọrụ, enweghị ike ikpa udo, enweghi ike ikpọ nzukọ nakwa enweghị ike ikpokọba ọmụmụ ihe ga-enyere ha aka ikwụdosi ike.
Ọsịrị na ka ihe si kwụrụ, na Oyegun na-agba mbọ nanị ime ka Tinubu nọrọ n’akụkụ. Ọsị n’ ọbụ nkea mere na Tinubu, bụ onye gbara nnukwu mbọ abataghị n’ime ọchịchị gọmenti nke na onweghị onye na-anụ onu Tinubu. Ọ sịrị na nkea gbara ndi mmadụ gharịị ma tụkwa ha n’anya
Obokwara Oyegun ebuboo dịka onye na-etinye ọgbata-uhie n’etiti onye isi ala nakwa Tinubu.
Kpodo gakwara n’ihu too onye isi ala bụ Buhari maka okwu okwuru kwugide ebum n’obi Oyegun bụ ịchị APC n’ụdụ achịzu achizu.
Previous Post: BUHARI AGỌỌLA AGỤGỌỌ NA EBUBOO ANA EBO YA GBASARA IMEGIDE OTU OKPUKPERE ỤFỌDỤ
Next Post: ỌHANEZE EKWOOLA NA HA AGBACHI NKỊTỊ KA-AKATỌỌ AHA IKE EKWEREMADỤ